Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Oo Sheegay In La Baarayo Shil Gaari Amisom Ku Dilay Qof Rayid Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
28th January 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiiraka Arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya C/llahi Goodax Barre ayaa sheegay in baaritaan lagu sameynayo sida uu ku dhacay shil gaari oo manta ciidamada AMISOM ku dileen qof rayid ah magaalada Muqdisho.
War qoraal ah isla maanta ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa lagu sheegay in dowladdu ka xun tahay geerida muwaadinka Soomaaliyeed, isla markaana ay baaritaan ku sameyneyso sababta dhimashadiisa.
“Aad bey uga xun tahay Xukuumada Soomaaliya shilka uu ku dhintay qofka rayidka ee muwaadinka Soomaaliyeed ahaa, waana la baari doonaa falkaas sida uu ku dhacay”ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre qoraal kasoo saaray xafiiskiisa.
Wasiir Goodax ayaa ugu baaqay AMISOM iney xushmeyso sharciga Soomaaliya, islamarkaana booliska Soomaaliya kala shaqeyso sidii baaritaan loogu sameyn lahaa falka uu ku dhintay muwaadinka Soomaaliyeed.
“AMISOM waxaan ugu baaqayaa inay xushmeyso sharciga Soomaaliya, ayna kala shaqeyso ciidamada booliiska Soomaaliya sidii baaritaan loogu sameyn lahaa shilkaas.” Ayuu wasiir Goodax.
Wasiirka ayaa sheegay in baaritaanka shilkan uu yahay mid meel sare kaga jira howshooda, wuxuuna si gaar ah ugu baaqay AMISOM inay ka taxadarto dhibaatooyin ku dhaca rayidka Soomaaliyeed.
Gaadiid ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa saaka ninka ku jiiray waddada Maka Al-Mukarrama, kuwaas oo aan istaagin markii uu ka dhacay shilku.
Shilkaan oo ka dhacay agagaraaaka Taree Biano ee wadada Maka Almukarrama ayaa keenay in dad careysan xirtaan wadada laamiga ah, taasoo markii dambe booliska ku kaliftay iney xoog u adeegsadaan kala ceyrintooda kadib markii ay diideen iney jidka furan.
Kismaayo: Amisom Oo Tababar Gaaban U Furtay 800 Askari Oo Taabacsan Maamulka Juba